လျင်မြန်စွာရေခဲခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအန္တရာယ်ကင်းသောအရည်ပျော်ပြား (Free Shipping & Tax) မဝယ်ပါနှင့် WoopShop®
$24.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $40.99
အရောင် L M ဆီလီကွန် pad ပါ S
L M ဆီလီကွန် pad ပါ S
လျင်မြန်စွာရေခဲခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအန္တရာယ်ကင်းသောအရည်ပျော်မှုန့်ပြား - L backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းအမည်: Defrost ဗန်း
အရွယ်အစား: S: 23 * 16.5 * 0.2cm, M: 29.5 * 20.5 * 0.2cm, L: 35.5 * 20.5 * 0.2cm
အလေးချိန်: S: 210g / M: 320g / L: 350g
Feature: Rapid Defrost Tray၊ Frozen Defrost
t ကိုမှတဆင့်သူသည်အထူးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ အရည်ပျော်ပြားများဖြင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သည်။ အေးခဲနေသောအစားအစာများလျင်မြန်စွာအရည်ပျော်သွားသည်
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုကိုချွေတာသည်။ အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမလိုအပ်ပါ၊ ရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသာသုံးစွဲပါ
နိယာမ - အရည်ပျော်သောပန်းကန်သည်အထူးသတ္တုစပ်ဖြစ်ပြီးအပူစီးကူးမှုအကြိမ် ၂၀၀၀၀ ၏အဆပေါင်း ၂၀၀၀၀ ထက်လျင်မြန်သောအပူဖလှယ်ခြင်းဖြင့်အေးခဲစေသောအစာများကိုအမြန်သဘာဝသွေ့ခြောက်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေသည်။
အားသာချက်များ - မြန်နှုန်း၊ တိုတောင်းသောအချိန်၊ ပထမဆုံးရွေးချယ်သောအချိန်ကိုထိရောက်စွာသက်သာစေပြီး၊ အစားအစာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၏မူလအရသာနှင့်အာဟာရကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ချေးမှုခံနိုင်မှု၊ တာရှည်ခံမှုသက်တမ်း
အားနည်းချက်: အထူးပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်
Thaw plate - အရည်ပျော်စေသောအခြားအရည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
လျင်မြန်စွာအရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်ထားသောအရည်ပျော်နေသောပန်းကန်ကို အသုံးပြု၍ အရည်ပျော်သောနှုန်းသည်သာမာန်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ၏ ၅.၆ ဆဆပ်နိုင်သည့်မြန်နှုန်းဖြစ်သည်။
အမြန်အရည်ပျော်စေသောပန်းကန်ကို အသုံးပြု၍ အရည်ပျော်နှုန်းသည်သာမာန်ကြွေထည်ပစ္စည်းများ၏ ၅.၆ ဆဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - ကြွေထည်ပစ္စည်းများကို ၉၁ မိနစ်ခန့်အရည်ပျော်ပြီးအရည်ပျော်နေသောပန်းကန်ကို ၁၆ မိနစ်ခန့်အရည်ပျော်သည်။
ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည် အထူးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရည်ပျော်နေသောပန်းကန်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဆီမကပ်ပါ။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ခြင်း! ရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာရန်အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါ။
အထူးသဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မညီညွတ်သောပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ အရည်ပျော်ပြားများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သောကြောင့်အေးခဲနေသောအစားအစာများသည်လျင်မြန်စွာအရည်ပျော်သွားသည်
မော်ဒယ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဆီလီကွန် pads သီးခြားစီဝယ်ယူမရနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုအရည်ပျော်ပြားများနှင့်အတူဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဆီလီကွန် pad ပါသီးခြားစီတင်ပို့မည်မဟုတ်
၁ * Square Thaw Plate - reasons ဆီလီကွန်ပြားများကိုစံပြအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သီးခြားဝယ်ယူ။ မရပါ။ ၎င်းတို့ကိုအရည်ပျော်ပြားများနှင့်အတူဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဆီလီကွန် pad ပါသီးခြားစီတင်ပို့မည်မဟုတ်)
17 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
Spokojnosť AJ ked Tovar neprišiel
Veryyyyyy ကောင်းသော, ကျေနပ်မှု!